Ny zavatra rehetra tokony ho fantatrao momba ny turbine Francis sy ny fomba fiasa | Fanavaozana maintso
Portillo Alemanina | | Angovo Hygroelectric
Ny iray amin'ireo singa ampiasaina indrindra manerantany amin'ny famokarana angovo herinaratra dia ny Turbine Francis. Izy io dia milina turbo izay novolavolain'i James B. Francis ary miasa amin'ny alàlan'ny fanehoan-kevitra sy ny fifangaroana. Izy ireo dia turbine hydraulic izay afaka manome fitsambikinana maro be ary mikoriana sy miasa amin'ny tehezan-dàlana manomboka amin'ny roa metatra ka hatramin'ny metatra maro.
Amin'ity lahatsoratra ity dia holazainay aminao ny toetra sy ny maha-zava-dehibe ny turbine Francis.
2 Cavitation ao amin'ny turbine Francis
3 Francis turbine faritra
Ity karazana turbinina ity dia afaka miasa amin'ny haavo tsy mitovy amin'ny metatra maromaro ka hatramin'ny metatra an-jatony. Amin'izany fomba izany dia natao hahay hiasa amin'ny loha sy mikoriana marobe. Noho ny lakaoly mahomby avo lenta izay namboarina sy ireo fitaovana ampiasaina amin'izany, ity maodely ity dia ho iray amin'ireo be mpampiasa indrindra eran'izao tontolo izao. Ny tena fampiasana azy dia eo amin'ny sehatry ny famokarana herinaratra amin'ny orinasa mpamokatra herinaratra.
Ny angovo Hydroelectric, araka ny fantatsika, dia karazana angovo azo havaozina izay mampiasa ny rano avo ao anaty kaontenera hahafahana mamokatra herinaratra elektrika. Ireto turbinina ireto dia sarotra be ary lafo vidy hametrahana azy nefa afaka am-polony taona maro. Izany dia mahatonga ny fampiasam-bola amin'ny vidiny voalohany amin'ny turbines karazana ity ho ambony noho ny ambiny. Na izany aza, mendrika izany satria ny fampiasam-bola voalohany dia afaka mandoa amin'ny taona vitsy voalohany. Tahaka ny angovo photovoltaic izay ampiasantsika panneaux solaire miaraka amin'ny fiainana salama ilaina mandritra ny 25 taona, azontsika atao ny mamerina ny fampiasam-bola mandritra ny 10-15 taona nampiasana.
Ny turbine Francis dia manisy endrika hydrodynamika izay Izy io dia manome antoka antsika fahombiazana avo lenta noho ny hoe zara raha misy fatiantoka rano. Izy ireo dia matanjaka amin'ny endrika ivelany ary ambany ny vidin'ny fikolokoloana. Ity dia iray amin'ireo teboka tsara indrindra amin'ity karazana turbines ity satria ambany ny fikojakojana ary inona no mampihena ny vidin'ny ankapobeny. Ny fametrahana turbine Francis misy haavo lehibe mihoatra ny 800 metatra dia tsy soso-kevitra mihitsy satria be loatra ny gravité. Tsy tsara koa ny mametraka an'ity karazana turbine ity amin'ny toerana misy fiovaovana lehibe eo amin'ny fikorianany.
Cavitation ao amin'ny turbine Francis
Ny Cavitation dia lafiny iray lehibe izay tsy maintsy fehezintsika amin'ny fotoana rehetra. Izy io dia fiantraikany hydrodynamika izay mitranga rehefa misy lavaka etona miforona ao anaty rano mamakivaky ny turbines. Toy ny amin'ny rano, dia mety hitranga amin'ny tsiranoka hafa rehetra izay ao anaty ranon-javatra ary avy eo dia niasa tamin'ny hery mamaly ny fahasamihafan'ny fahaketrahana. Amin'ity tranga ity dia mitranga izany raha mandalo amin'ny hafainganam-pandeha ny tsiranoka amin'ny sisiny maranitra ary misy ny fihenan-danja eo amin'ny tsiranoka sy ny fitehirizana ny fikajiana Bernoulli.
Mety hitranga fa ny tsindry etona avy amin'ny ranoka dia amin'ny fomba izay afaka miova avy hatrany ny molekiola avy amin'ny etona ary endrika bika be dia be. Ireo lavaka ireo dia fantatra amin'ny hoe loaka. Io no niavian'ny fotokevitra momba ny cavitation.
Ireo bubble rehetra ireo fitsangatsanganana any amin'ny faritra izay misy tsindry avo kokoa mankany amin'izay tsy dia misy tsindry. Nandritra ity dia ity dia niverina tampoka tao anaty toedan'ny rano ilay etona. Izany dia miteraka fikapohana, famoizam-po ary famokarana lalan-tsolika izay mamokatra angovo betsaka amin'ny tampon-tany ary mety hitresaka mandritra ny fifandonana.
Izany rehetra izany dia mahatonga antsika tsy maintsy mandray ny kavitera ao amin'ny turbine Francis.
Francis turbine faritra
Ity karazana turbinina ity dia samy manana ny anjarany ary ny tsirairay dia miandraikitra ny fiantohana ny famokarana angovo herinaratra. Handinika ny tsirairay amin'ireto faritra ireto izahay:
Efitry ny spiraly: Io dia ny ampahany amin'ny turbine Francis izay tompon'andraikitra amin'ny fizarana mitovy ny tsiranoka amin'ny fidiran'ny impeller. Ity efitrano boribory ity dia manana endrika sifotra ary izy io dia satria ny hafainganam-pandehan'ny tsiranoka dia tsy maintsy mijanona tsy tapaka isaky ny teboka aminy. Izany no antony tsy maintsy ananana endrika boribory sy sifotra. Ny faritra ampitan'ity efitrano ity dia mety ho isan-karazany. Amin'ny lafiny iray, mahitsizoro ary amin'ny boribory iray hafa, ny boribory no matetika matetika.
Mpizara: Io no ampahany amin'ity turbine ity izay vita amin'ny lelany miorina. Ireo lelany ireo dia manana firafitry ny rafitra fotsiny. Izy ireo dia mitazona ny firafitry ny efitrano boribory izay noresahintsika tetsy ambony ary manome henjana ampy ahafahana manohana ny rafitra hydrodynamika iray manontolo ary mampihena ny fatiantoka rano.
Mpizara: Ity ampahany ity dia namboarina tamin'ny alàlan'ny vanobe mpitari-dalana. Ireo singa ireo dia tsy maintsy mitarika ny rano mankany amin'ireo Arabo mpanosika izay raikitra. Ankoatr'izay, ity mpizara ity dia miandraikitra ny fanaraha-maso ny fivezivezena avela rehefa mandalo ny turbine Francis. Izany no fomba hanovana ny herin'ny turbine ka tsy maintsy ahitsy araka izay azo atao amin'ny fiovaovan'ny enta-mavesatra amin'ny tambajotra elektrika. Mandritra izany fotoana izany dia afaka mitarika ny fikorianan'ny tsiranoka izy mba hanatsarana ny fahombiazan'ny masinina.
Impeller na rotor: io no fon'ny turbine Francis. Izany dia satria io no toerana misy ny fifanakalozana angovo eo anelanelan'ny milina iray manontolo. Ny tanjaky ny tsiranoka amin'ny fotoana andalovany ny impeller dia ny habetsaky ny angovo kinetika, ny angovo ananan'ny tsindry ary ny angovo mety ho an'ny haavony. Ny turbine dia tompon'andraikitra amin'ny famadihana ity angovo ity ho angovo elektrika. Ny impeller dia tompon'andraikitra amin'ny fampitana io angovo io amin'ny alàlan'ny tsorakazo mankany amin'ny mpamokatra herinaratra izay anaovana io fanovana farany io. Izy io dia mety manana endrika isan-karazany arakaraka ny isan'ny revolisiona namboarina ho an'ilay milina.
Tube fitrohana: Io ilay ampahany mivoaka avy amin'ny turbine ny tsiranoka. Ny asan'ity ampahany ity dia ny manome fitohizan'ny tsiranoka ary mamerina ny fitsambikinana izay very tao amin'ireo fotodrafitrasa ambonin'ireo haavon'ny rano fivoahana. Amin'ny ankapobeny, ity ampahany ity dia natsangana tamin'ny endrika diffuser ka mamokatra effet suction izay manampy amin'ny famerenana ny ampahany amin'ny angovo mbola tsy natolotra ny rotor.
Manantena aho fa amin'ity fampahalalana ity dia afaka mianatra bebe kokoa momba ny turbine Francis ianao.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Fanavaozana maintso » Angovo azo havaozina » Angovo Hygroelectric » Turbine Francis
Toeram-pamokarana hafanana Compostilla